मार्मिक पत्र: विप्लव दाई ! के केपी, प्रचण्ड र देउवालाई सेवोटेज गरेर समाजवाद आँउछ ? - Nepal's Digital News Paper
मार्मिक पत्र: विप्लव दाई ! के केपी, प्रचण्ड र देउवालाई सेवोटेज गरेर समाजवाद आँउछ ?
भरतसिंह कोसियारीको पेट्रोलमा शशांककोे सलाई देख्दा खुशी नै हुनु हुन्छ होला । युद्धको खेति गरेर डलरको बाली भित्र्याउनेहरुको ‘न्याय’को तरबारले प्रचण्डहरुलाई ताकि रहेको देख्दा आनन्द पनि लाग्छ होला । उताको इण्डो प्यासिफिक देखि यताको दलाईहरुको हर्कत हेर्दा क्रान्तिको भूमि उर्वर देख्नु स्वभाविक नै हो । कतै यी सबै चक्रलाई नै एकीकृत क्रान्तिको रुप दिनु भएको त होइन ? विप्लव दाई !
तपाईंको वक्तव्य जुन माध्यमबाट मैले प्राप्त गरे त्यही माध्यमबाट यो पत्र तपाईंले पाउनु हुनेछ भन्ने म आशा गर्दछु ।
लेनिनले भनेको ठोस परिस्थितिको ठोस विष्लेषणका आधारमा यसको निर्धारण गर्नु पर्दछ । अहिले शसस्त्र क्रान्तिको जरुरत छैन । यो ठोस परिस्थिति हो । जसलाई माक्र्सवादको सार भनियो । क्रान्ति निरन्तर प्रक्रिया हो तर यसको स्वरुप सँधै एकनासको हँुदैन । समयसँगै यो पनि गतिशिल हुन्छ ।सबै सशस्त्र गतिविधिहरु क्रान्ति हुँदैनन् । तपाईलाई थाहा छ हतियार त तालिवान, बोकोहराम, मुजाहिद्दिन, आइएसहरुले पनि उठाएकै छन् । मूख्य सवाल लक्ष्यको हो । माक्र्सले पेरिसका कम्युनार्डहरुलाई तत्काल विद्रोह नगर्न भन्नुको तात्पर्य दुइवटा थियो । एक, विद्रोह सफल हुने संभावना थिएन, दुई, प्राप्त वुर्जुवा गणतन्त्र उल्टिएर राजतन्त्र फर्कने संभावना थियो साथै जर्मनीको हस्तक्षेप पनि । इतिहासबाट हामी केही त सिक्छौं होलानी ?
‘देशमा राजनीतिक क्रान्ति सकियो अब आर्थिक क्रान्तिको युग शुरु भयो’ भन्ने भाष्यकार तपाईंकै शब्दमा ‘कोखामा दाँत भएका मान्छे’को पुष्पलाल लोकमार्गको देश दौडाहाबाट प्राप्त ब्रह्माज्ञान भर्भराउदा युवा विप्लवतिर लागेको देखेको पनि हिसाब गर्नु भएकै होला । भरतसिंह कोसियारीको पेट्रोलमा शशांककोे सलाई देख्दा खुशी नै हुनु हुन्छ होला । युद्धको खेति गरेर डलरको बाली भित्र्याउनेहरुको ‘न्याय’को तरबारले प्रचण्डहरुलाई ताकि रहेको देख्दा आनन्द पनि लाग्छ होला । उताको इण्डो प्यासिफिक देखि यताको दलाईहरुको हर्कत हेर्दा क्रान्तिको भूमि उर्वर देख्नु स्वभाविक नै हो । कतै यी सबै चक्रलाई नै एकीकृत क्रान्तिको रुप दिनु भएको त होइन ? विप्लव दाई ! यी सब फलामले फलाम काट्ने तरिकामात्रै हुन् । दलालको विरोध गर्दागर्दै कतै दलाल नै त बनिदैन ? तपाईलाई शक्ति मानेर ती सब तपाईका वरिपरि घुम्छन् र तीनैसँग सत्ता साझेदारी हुन्छ भन्ने भ्रम छ भने आजै देखि मुक्त भए राम्रो ।
तपाईका प्रवक्ताको हस्तलिखित डायरी जो उहाँँसँगै गिरफ्तार भएको थियो । त्यसमा उल्लेखित सेबोटेजको योजना कसरी कोर्न सक्नु भयो ?? मानौं तपाईको योजना सफल भयो र केपी वली, प्रचण्ड र देउवालाई सेबोटेज गर्नु भयो, त्यसपछि के हुन्छ ? दलाल पूँजीवाद सकिएर वैज्ञानिक समाजवाद आँउछ ?
हामी कोही राजा महाराजा त होइनौ जो सँग तपाईलाई सहकार्य गर्न अप्ठ्यारो होओस् । आज तपाई एउटै मोर्चामा लडेका साथीहरुलाई तारो बनाउदै हुनुहुन्छ । यो समयको बर्बादी मात्रै हो । तपाईसँग वैचारिक मोर्चा खोलेर लड्ने अवसर रहेसम्म तपाईले भौतिक मोर्चा खोल्नु घातक हुन्छ त्यो पनि सहयोद्धाहरुसँग । पार्टी र आन्दोलनहरु भित्र विपरित प्रवृतिहरु हुन्छन् ती प्रवृतिहरुको समाधान शत्रुतापूर्ण तरिकाले होइन विचारधारात्मक तरिकाले लडिनु पर्छ । माओले फरक फरक अन्तरविरोधको समाधान फरक फरक तरिकाले गर्नु पर्दछ भन्नुको तात्पर्य त्यही हो । तपाईले नेकपालाई प्रमुख दुष्मण मानेर अरु सबैसँग संयुक्त मोर्चा बनाउने जुन नीनि लिनु भएको छ त्यो पुरै गलत छ । यसले विनाश मात्रै निम्त्याउछ ।
तपाईको शुभ चिन्तक ।
( लेखक रामदिप आचार्य सत्तारुढ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुन्)